Jiangsu KingRay Composite Material Co., Ltd. matihanina no mpanamboatra ny PTFE / Teflon miray volo fusing fehin, Teflon Laminator Release Fabric / Teflon fiberglass lamba, Teflon fiberglass adhesive lamba, Teflon fiberglass volovolo fehin-kibo, Teflon lafaoro linner, Teflon microwave fanamainana fehin-kibo, Teflon hafanana famehezana fehin-kibo, Teflon Separater Release Belt, silicone fingotra lamba. Amin'ny mandroso fitaovana sy ny teknolojia.
Efa lasa ISO9001 sy Alemaina DQS fanamarinana ao amin'ny niray raharaha an-tokantrano. Hatramin'ny fananganana, dia efa manaraka ny orinasa fanahin'ny "Specialization, Technicalization, Scale, olona Voalohany, sy ny fanavaozana."
Efa nanorina fifandraisana maharitra niaraka tamin'ny mpanamboatra milina malaza na ao an-trano sy any ivelany, toy ny Veit GmbH, Hashima, Oshima, Summit, ary KDK orinasa. Ny vokatra dia be naondrana any amin'ny firenena mihoatra ny 20 sy faritra, ary efa nahazo mpanjifa 'hatoky sy ny fiderana.
Antoka isika fa ny vokatra avo lenta sy tsara dia hisarika tolotra bebe kokoa ny mpanjifa 'fankasitrahana. Nifandray antsika no dingana voalohany mba hanorina fifandraisana raharaham-barotra miaraka amintsika. Raha toa ianao ka liana na inona na inona ny vokatra, Aza misalasala hitsidika ny tranonkala na andefaso olona antsika mivantana Raha mila fanazavana fanampiny. Tsy andrintsika ny miara-miasa aminareo tsy ho ela.